» DHAGAYSO: Sh Aadan Madoobe oo diiday Jubbaland sheegayna in la mideynayo Lixda gobol ee…
DHAGAYSO: Sh Aadan Madoobe oo diiday Jubbaland sheegayna in la mideynayo Lixda gobol ee…
February 22, 2013 - Written by maamule - Edited bymaamule ShareSh Aadan Maxamed Nuur Sh Aadan Madoobe ayaa shaaca ka qaaday inaysan qaadan doonin maamulka loo dhisayo gobollada Jubbooyinka isagoo tilmaamay in ay dhisayaan maamul ay udhen yihiin lixda gobol ee dhaca Koofurta Soomaaliya.
Warays Xasaasi ah oo uu bixiyay ayaa Aadan Madoobe Gudoomiyihii hore ee barlamaanka Soomaaliya waxaa uu sheegay in Axmed Madoobe uu hoostagi doono maamulka la qorshaynayo in laga dhiso Jubbooyinka maaadaama aysan aqoonsanayn dowlada Soomaaliya sida uu hadalka udhigay xildhibaankan katirsan mudanayaasha barlamaanka.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayaa Aadan Madoobe waxaa uu farta ku fiiqay in ay ka go’an tahay mideynta gobollada Koofur Galbeed Soomaaliya ee Gedo, Jubbada Hoose, Jubbada dhexe, Bay, Bakool iyo Sh/Hoose.
Riix Halkan si aad udhagaysato Go’aanka Aadan Madoobe
23 Responses to DHAGAYSO: Sh Aadan Madoobe oo diiday Jubbaland sheegayna in la mideynayo Lixda gobol ee…
Manaxe says:	February 22, 2013 at 16:30	Raxanwen in lotaliyo unbaynu aragnee. Ma iyada talinba karta
Reply	Bydhabo boy says:	February 22, 2013 at 21:28	Nac nac lamarabo gobalada qofka daga wala ogyahay j/dhaxe waxaa dagaa rahwen jinaayo j/hoose way dagan somaliyana qoomiyada ugu fcna waa rahwen is kadaya sidi malanti kismayo laqabsanayo way ogtihin habsade qabsaneyey hayey hayey kacabso Rahwen
Reply	Manaxe says:	February 22, 2013 at 16:33	Raxanwen in lotaliyo unbaynu aragnee. Ma iyada talinba karta .
Reply	ASAL JUBBA says:	February 22, 2013 at 16:36	Dadka labad Jubo iyo Gedo dagan ee diidkan Shirka Axmad Madoobe iyo Kooxdiisa Al Shabaabka ah ee hadana ka soo haajiray Kilinka Shanaad. Waa kuwan akhri, dhamaan beelahan waa beelo si wayn udagan Jubada Hoose, Jubada DHexe ama Gedo.
4. Digil iyo Marifle
Beelaha ogol in Shirkani la qabdo, gar iyo gardarraba waa 1. Ogaadeen
Ma wadar baa waalan iyo inta badan, mise waxaa waalan hal qabiil oo daga hal dagmo?
Reply	Quursi diid says:	February 22, 2013 at 16:43	Aadan madobe maxa kagalay gedo iyo juboyinka dhismahoda
Reply	Ismo says:	February 22, 2013 at 16:59	warkaga lagu ma jiro duq iska amuse. Sidasas ayada ku ficantahtahey
Reply	Iamail abdulahi says:	February 22, 2013 at 18:20	Raxawayn iska aamus aamuskaad kufiicantahaye waayo iskahadle nin wayn waa dameer iska ciyay
Reply	Sahal abdi hasan dhugad says:	February 22, 2013 at 18:28	Kkkk war aden madoobe mxaaa ka galay war ileen balaayo ma rawaxaynbaa kahadli karta jubooyinka war meesha ma ufuroow buu jogaa mise bakarti xumayd ee wuu qodanayay ayaay umalayni war xishoo xitaa khataa bilahi waxan kataganahay gudominima barlamaanka ayagoon uqalmin
Reply	Burte says:	February 22, 2013 at 18:31	Madobe maxa kagalay jubbland maxan ku ogeyn bakartiye
Reply	ASKAR says:	February 22, 2013 at 18:31	We know that raxawayn to be managed but it is warnderful raxawayn managing and heading the jubbaland
Reply	Sahal abdi says:	February 22, 2013 at 18:36	War ilen balayo war rawaxayn la mamulo ayan arki jiray e rawaxeyn rabta in ay wax mamusho war aden madobe mxu umalayni in lajogo ufurow iyo madhayto k.k.k.k.k.k. Rawaxeyn ba war kentay
Reply	Sahal abdi says:	February 22, 2013 at 18:38	Rawaxeyn rawaxayn rawaxayn k.k.k.k.k.k.k.k.k.k.k. Ufurow ufurow ufurow
Reply	Aato:city says:	February 22, 2013 at 18:40	Kkkkkkk chaa adan madoobe ma waxuu u malaynayaa in bakaar lasoo qufanaayo waaba layaabe
Reply	Burte says:	February 22, 2013 at 18:43	Madobe ninka ladhoho marki horo banbiir ayu qabi jiray cuntana bakaar ayu cuni jiray k.k.k.k.
Reply	ASAL JUBBA says:	February 22, 2013 at 19:31	@ Ismail Abdillahi iyo @ Sahal
Saaxiibayaal anigu ma’ihi nin Raxanwayne ah, sida idinka muuqata ama lahjadiina ka muuqatadan dhamaantiin Kilinka Shanaad baad ka timaadeen.
Waxaan filayaa in aydaan ogayn Labad Jubo iyo Gedo sida loo kala daganyahay. Waxaad rumeysan waxa ay beesha Ogaadeen isugu sheekayso iyo qayladan badan oo aad moodaysaan inaad wax ku helaysaan ama aad dhul dad kale ku qaadan kartaan.
Horta Soomaali 5 qabiil bay wax ku qaybasatay. Shanta qabiilba way ku dhanyihiin Jubooyinka.
Dir, Daarood, Digil iyo Mirifle iyo Hawiye iyo Beesha Shanaad.
Tusaale, Raxanwayne qaybo kamid ah Gedo ayay dagtaa, sida Degmada Baardheere iyo Qansaxdheere, Yurkud, xitaa Luuq waxbay ka daganaan inkasta oo Beesha ugu wayn ey Mareexaantahay.
Jubada Dhexe Raxanwayne si fiican bay ugagaan oo Bu’aale waa Xarun Raxanwayne, oo Dabbaare iyo Ajuuraan baa dagan. Saakoow sidoo kale Macalin wayne oo Raxanwayne ah baa dagan. Afmadow xitaa Hubeer oo Raxanwayne ah baa dagan, Badhaadhe xitaa Hubeer baa dagan.
Hadii aan soo qaato Beesha Sheekhaal, waxay dagantahay Hoosingo laga soo bilaabo oo ah xukuuda Kenya ilaa Kismaayo duleedkeeda, hadana Kismaayo kasoo bilow ilaa Baraawe duleedkeeda. Beeshani waxaydagantahay Lix Degmo oo kala ah, Hoosingo, Kismaayo, Jamaame, Jilib, Xaran, Badhaadhe, geela ugu badan ee daaqa dhulka Dhasheeg Waamo la yiraado waa Sheekhaal.
Mareexaan Beesha la yiraado waa beel aad ubadan oo degan inta ugu badan gobolka Gedo, inkasta oo ay beelo kale ay la wadaagaan, Luuq, Doolow, Buurhduubo, BeledXaawo, Ceelwaaq, Baadheere, Garbohaareey, Faafxadhuun, Sarinley sii wad ilaa Afmow duleedkeeda laga gaadho. Kismaayo hadda aad bay udaganyihiin.
Beesha Gaaljecel, Kismaayo ka billow ilaa aad gaadho Buur Gaabo iyo Kudhaa waa Gaaljecel, Magaalada Kismaayo aad bay udaganyihiin. Dagmada Badhaadhe way daganyihiin.
Cawramale sidoo kale Degmada Kismaayo, Dhankeeda galbeed iyo Koonfureedba way daganyihiin, Magaalada Kismaayo aad bay udaganyihiin, iyaga iyo Sheekhaalba.
Biyomaal, Jamaame ayaa kale oo dagan oo aan ka ahayn Biyomaal iyo Sheekhaal iyo Jareer.
Jareerwayne, Wabiga labadiisa daan magaalo kasta oo dagto iyagaaba dagan.
marka sidaas ulasoc wiilkaagan ama odaygaagan Kilinka Shanaad ka imaaday, dhulka ma taqaanid, ee soo baro.
Raxanwayn waa dad sharaf leh wayna ku xukumi.
Reply	Hadame says:	February 22, 2013 at 19:56	Adan madobe hanolado danta dadka iyo dalka adaa yaqano raxweyn hanolato
Reply	Aato:city says:	February 22, 2013 at 20:07	Kkkkkkkkkk alla waa layaab waayo madobe maxaa kagaly juba stat
Reply	Dr Ayub says:	February 23, 2013 at 02:48	Adan madobe juboyan asaga leh fad ama hafadin wa lagu fadsin calanki gorhore ayu dhacey Daroodow dabadhilif
Reply	cabdulkadir Wadani says:	February 23, 2013 at 03:11	maashaa’allaah, mahad celiin ayuu mudan yahay mudanaha la magac baxay (Asal”Jubbo) run ahaan waa nin culus run badan waayo arag ah dal yaqaan ah, beellaha somaliyeedna ku taqaqusay geed geed ceel ceel iwm, sidu u sharaxayna waan la cajabay,waayo waxaan kusoo wada maray shaqo dawladeed,1987, qaybta sahanka daruufaha deegaanada dalka, XHKS, MUDANE ASAL JUBBO MAHADSANID
Reply	Rooble says:	February 23, 2013 at 07:46	Dadkii beryahan ku hayay maamul ayan dhisayna may dhisaan ya Ka hortaagan hadii maamul aya rabaan wa inay tagan magalada baydhabo ee golobka bay hadii kuwan kismayo iskugutagay waxbo masayn karaa.
Reply	shaatiyare15@hotmil.com says:	February 23, 2013 at 08:31	raxnweyn habrtiinu wasey
Reply	Bu'aale Boy says:	March 2, 2013 at 15:44	Dadka aan u dhalan Jubada dhexe yaysan ka hadlin, gobalkaan waa seddex degmo kaliya sida dowladii hore ay ku ogeyd, Bu’aale oo xarun u ah, Saakow, iyo Jilib.
Bu’aale, waxaa degan Ajuuraan iyo Raxaweyn, iyo Absame yar oo magaalada banaankeeda la soo dejiyay, laakiin Tuulooyinka, xoolaha iyo beeraha Magaalada Bu’aale waxaa iska leh Ajuuraan iyo Raxanweyne, Car Absame tuulo ka mid ah ha sheegaan Bu’aale oo ay degaan, waxaana u sheegeynaa kontameeyo yuulo oo Ajuuraan iyo raxaweyn ay ku leeyihiin gobalkaasi, saakow waa magaalo Raxanweyne oo waxaa la degay Ajuuraan iyo xooga gaal jecel, sidoo kale Jilib waa magaalo ay degaan jareer iyo Shiiqaal, xoogaa xawaadle, Ajuuraan iyo gaal jecelna way degaan. marka dadka iska hadaaqayo oo aan degin Jubada dhexe ha aamuseen.
Reply	shaatiyare15@hotmil.com says:	March 14, 2013 at 14:13	raxwen xukunk ayada uga sareysa iskada ee juboyinka waa dada jira iyo dal jira ayey lee dahay aflagada hala is ka daayo dowlad waa raxawen dadna waa rax ween dumiga iskadaaya